Portal yeBIU www.biu.edu.ng/ Jonga uHlaziyo lwangoku lweSicelo 2021: Iindaba zeSikolo sangoku
I-BIU Portal: Igunya leYunivesithi yaseBenson Idahosa lenze ukuba i-portal yabafundi iqhubeke. Ke, njengomfundi okanye umfundi oza kuba sesikolweni, olu lwazi kufuneka lube nomdla kuwe.
Kwakhona, kweli nqaku, uya kufumana ulwazi malunga nendlela yokungena kwi-portal ye-BIU. Kodwa kuqala, ngaphambi kokuntywila kuloo nto, wazi ntoni ngeYunivesithi yaseBenson Idahosa?
Kule portal, imisebenzi emininzi yokufunda inokwenziwa ngokukhululeka. Nangona kunjalo, ukwazi okungakumbi malunga noku, kuya kufuneka ufunde eli nqaku.
Benson Idahosa University (BIU) Iyunivesithi yabucala, yamaKristu eBenin City, eNigeria. I-BIU (eyayibizwa ngokuba yiChristian Faith University) yaphinda yanikwa igama kwakhona Ubhishophu omkhulu UBenson Idahosa.
WayenguMphathiswa wePentekoste waseCenism waseBenin City, eNigeria, kwaye ubonakalisa iinkolelo zakhe zobuvangeli. Kwakhona, wayengumongameli wokuqala wale yunivesithi. Umongameli wangoku weYunivesithi yaseBenson Idahosa ngu-Rt. UMfu (uGqr.) Ukholo u-Emmanuel Benson Idahosa.
Ungunyana kaBenson Idahosa. Ukwangumbishophu we-CGMi Faith Arena kunye noMququzeleli, ubuNkokheli obuLandelayo beCawe yoThunywa lukaThixo. I-BIU igunyazisiwe ngumbutho wokugunyazisa imfundo eNigeria, IKomishoni yeeYunivesithi zeSizwe.
Ukubaluleka kweBIU Portal
Ukuba ufuna Ukungena kweBIU Portal, Iziphumo ozifunayo zingezantsi. Nangona kunjalo, ngaphambi koko, makhe siqwalasele ukubaluleka kwale portal.
Apha ngezantsi zizibonelelo eziphambili zeBIU Portal
Kukudala iakhawunti okanye ungene ukuze wenze amanyathelo athile ezifundo ngokukhululeka.
Kwakhona, kulapho zonke iinkqubo zeyunivesithi ezenziwa kwi-Intanethi kunye neenkqubo zokwamkelwa zenziwa khona.
Ukongeza, i-portal isetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo njengokufaka isicelo sefom yokwamkelwa. Kwaye isetyenziselwa ukubhalisa, kunye nokujonga uluhlu lokwamkelwa.
Ngapha koko, iyanceda ukufikelela kwinqanaba lokwamkelwa, ileta yokwamkelwa, ukulayishwa kweziphumo zokwamkelwa kunye neminye imisebenzi enxulumene nokwamkelwa
Ungandwendwela kwaye ufikelele kwiBenson Idahosa University Student Portal usebenzisa ikhompyuter okanye iselfowuni ngale linki ilandelayo:
Isango labafundi beBIU Cofa apha
Kwakhona, iwebhusayithi ephambili yeBIU: Cofa apha
Ngaphezu koko, Ndwendwela Apha
kwakhona, Ndwendwela Apha
Idilesi ye-imeyile yoBhaliso ye-BIU: [imeyile ikhuselwe]
Nangona kunjalo, ukuba unayo nayiphi na imvakalelo malunga nokungena kwe-portal yomfundi weYunivesithi yaseBenson, nceda uncede uphonononge ingxelo engezantsi kwaye siza kuyiphendula ngokukhawuleza.
Ukongeza, ungathandabuzi ukuthanda amaqonga ethu ezentlalo ukuze wabelane, uxoxe kwaye ufumane uhlaziyo lwamva nje malunga neziko.
Benson Idahosa University (BIU) Uncedo lwePortal
1. INkqubo eNtsha yokuHlawula abaFundi
Cofa apha kwaye ungene usebenzisa iJamb Reg yakho. inombolo (igama lomsebenzisi) kunye negama lokugqitha lokugqitha (iphasiwedi1). Emva koko hlaziya ulwazi lweenkcukacha zakho. Ngapha koko, unga:
Cofa iifizi ukuze wenze intlawulo yokwamkelwa.
Skrolela emazantsi ephepha kwaye ucofe imali yokuhlawula.
Cofa uqhubeke, emva koko uprinte i-ID yakho yokuthenga ngentlawulo yokwamkelwa.
Ukongeza, qhubela phambili kuyo nayiphi na i-FIRST okanye i-UBA Bank kunye ne-ID yokuThengiswa kwentlawulo yokwamkelwa.
Nangona kunjalo, emva kokwenza intlawulo, iREDO Inyathelo 1
Cofa ihostele kwaye ukhethe ihostele oyithandayo.
Kwakhona, cofa iifizi kwaye uphawule intlawulo epheleleyo ukuba uhlawula yonke enye skrolela ezantsi kwephepha kwaye ucofe imali yokuhlawula.
Ukongeza, cofa uqhubeke kwaye uprinte isavenge sakho sokuqala okanye i-ID yentengiselwano epheleleyo.
2. Inkqubo yokuBuyisa yoMfundi
Cofa apha kwaye ungene usebenzisa iJamb Reg yakho. inombolo (igama lomsebenzisi) kunye negama lokugqitha lokugqitha (iphasiwedi1)
Yiya kwiinkonzo zezemali ukuze ufumane imvume yokufumana iifizi zesikolo zemfundo iseshoni ukuba iakhawunti yakho ikhubaziwe. Qhubela kwiyunithi ye-ICT ngoncedo lokwenza iakhawunti yakho yabafundi isebenze.
Hlaziya iinkcukacha zakho zobuqu.
Kwakhona, cofa ihostele kwaye ukhethe ihostele oyithandayo.
Ukongeza, cofa imirhumo kwaye phawula intlawulo epheleleyo ukuba uhlawula yonke enye skrolela ezantsi kwephepha kwaye ucofe imali yokuhlawula.
Ngapha koko, cofa uqhubeke kwaye uprinte isavenge sakho sokuqala okanye i-ID yentengiselwano epheleleyo
Qhubeka uye nakweyiphi na i-BANK YOKUQALA okanye i-UBA Bank kunye ne-ID yokuSebenza yentlawulo yokwamkelwa
Siyakholelwa ukuba eli nqaku likuncede kakhulu. Zive ukhululekile ukuba wabelane nabanye kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo.
I-Benson Idahosa Yunivesithi Yokuthumela I-UTME Imibuzo Edlulileyo 2021 kunye neempendulo Ukukhuphela kwePDF
Umhla wokuqalisa kwakhona we-BIU 2020/2021 Iseshoni eNtsha kunye nabaFundi abaBuyayo
I-Benson Idahosa Yunivesithi yePosi ye-UTME yeFomu ye-2020/2021 Inkqubo yoVavanyo lweNkqubo
Uluhlu lokungeniswa kwabafundi kwiYunivesithi yaseBenson Idahosa 2016/17 luphumile
Faka isicelo ngoku kwiSithuba seYunivesithi yaseBenson Idahosa kuMphicothi zincwadi oyiNtloko onamava ngo-2016
Faka isicelo ngoku seGosa leeAkhawunti kuYob
I-FCAHPTVom ATBU Post ye-UTME / yeFom yeFom 2020/2021 yeSeshini yokuHlolwa kweSeshini
tags: Benson Idahosa University, Uncedo lweyunivesithi yase-benson idahosa (biu), portu yebiu, Ukubaluleka kwe-portal biu
« I-FUNAAB Portal yaBafundi www.unaab.edu.ng/ Jonga iPortal yesicelo samva nje
Injineli yezoLuntu (Yobe) Isithuba kwiNkqubo yoPhuhliso yeZizwe eziManyeneyo 2021 »
Iingcebiso zokuphucula iZakhono zakho zeMathematika